WAR CUSUB: DF Somaliya oo qorsheyneysa in AMISOM lagu beddelo ciidamo ka socda Turkiga iyo Eritrea. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: DF Somaliya oo qorsheyneysa in AMISOM lagu beddelo ciidamo ka...
WAR CUSUB: DF Somaliya oo qorsheyneysa in AMISOM lagu beddelo ciidamo ka socda Turkiga iyo Eritrea.
Muqdisho (Halqaran.com) – Wargeyska The East African ayaa daabacay warbixin ku saabsan qorshe ay waddo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku dooneyso in ay hesho Ciidankii beddeli lahaa kuwa Amisom ee sanadka 2021 ka dalka ka baxaya.
Wargeyska oo xiganaya ilo kala duwan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda wada hadal kula jirto dalalka Turkiga iyo Eritrea oo ay ka dooneyso Ciidan si ay u wajahaan dagaalka Al-shabaab.
Turkiga waxaa uu horay u joogay Soomaaliya waxaa uu dalka ka fuliyaa mashaariic kala duwan sida dhismaha waddooyinka, Iskuullada, Isbitaallada, Goobaha Diinta, waxaa uu taageeraa miisaaniyadda dowladda waxaa kale oo uu tababaraa Ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo uu qaarkood dalkiisa ku tababaro kuwana uu ku tababaraa saldhigga uu ku leeyahay Muqdisho.
Eritrea waxaa ay sanadkii hore soo ceshatay xiriirkii ay la laheyd Soomaaliya kaas oo go’naa muddo 15 Sano ah, waxaana sababta ugu weyn ahayd in lagu eedeyn jiray Eritrea taageero ay siiso dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.
Xiriirka Soomaaliya iyo Eretrea waxa soo celiyay waxaa ka mid ah heshiiskii Waddamada Itoobiya, Jabuuti, Soomaaliya iyo Eritrea gaareen sanadkii hore kaas oo dalalka Kenya , Uganda iyo Burundi u arkeen in saddexda dalka isku baheysanayaan bulshada ay ka soo jeedaan ee loo yaqaan Kusheetigga.
Warbixinta Wargeyska waxaa lagu sheegay in ka hor inta Ciidanka Amisom aysan ka bixin Soomaaliya qorshuhu ahaa in loo tababaro loona qalabeeyo 30, 000 oo Askari hayeeshee ilaa hadda la diyaariyay 10,00 oo kali ah.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa meel mariyay qaraar Ciidanka Amisom guud ahaan uga baxayaan Soomaaliya 31da December sanadka 2021ka inta ka horreysanaya ay si tartiib tartiib ah uga baxaan dalka iyada oo amaanka lagu wareejinayo Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Turkiga iyo Eritrea